Hindise dowladdu ku dooneyso in la adkeeyo sharciga guurka carruurta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabar toddoba sano jir ah oo loo wado nin la siiyey. Sawirle: Prakash Hatvalne/Scanpix.
Hindise dowladdu ku dooneyso in la adkeeyo sharciga guurka carruurta
La daabacay onsdag 12 februari 2014 kl 14.59
Dowladda dalkaan ayaa dooneysa in la adkeeyo sharciga lagu maamulo carruurta la guuriyo iyo guurka khasabka ah. Khamiista berri ah ayey dolwaddu hindisaheeda u gudbineysaa guddiga sharciyada ka talabixiya inta la go’aamin. Sidaasna waxaa bogga doodaha ee wargeyska Dagens Nyheter maanta ku soo qoray wasiiradda caddaaladda Beatrice Ask iyo wasiiradda arrimaha sinnaanta ragga iyo dumarka Maria Arnholm.
Waxyaalaha sharcigaan ku cusub waxaa ka mid ah sharci cusub oo lagu maamulo guurka khasabka ah. Maanta waxaa sharcidarro ah in qof lagu dirqiyo guur uusan raalli ka ahayn, laakiin waxaa hadda la doonayaa in sharcidarro laga dhigo in qof lagu qalqaaliyo guur iyadoo laga baahida qofkaasi u qabo qofka qalqaalinaya. Hadda kadib u ma baahnaan doonto in khasab muuqda lagu xiro. Ciqaabta dembiga noocaan ahina wuxuu noqon karaa ilaa afar sano oo xabsi ah.
Waxaa kaloo sharcidarro noqonaya in carruur loo diyaariyo guur carruurnimo ama guur khasab ah, iyo in inta sharciga la garabmaro dal kale khasab loogu soo guuriyo.
Hindisaha waxaa lagu soo jeediyey in da’da kama dambeynta ah oo guur lagu karo ay ahaato 18-sano. Sidaas ayaana meesha looga saarayaa fursadihii xaddadnaa oo gabdhaha iyo wiilasha looga dhaafiyey da’da 18 sano si ay u guursadaan.
Haideh Daragahi oo caalin ku takhasustay cilmiga taariikhda fekerka isla markaasna ah ruux ka qaybqaata doodaha arrimaha bulshada ayaa ka mid ahayd dadkii muddo badan ku soo doodayey in sharciga la adkeeyo. Iyadoo soo dhoweyneysa hindisahaan dowladda waxay tiri:
- Waxaan aamminsanahay in ay arrintani muhiim u tahay gabdhaha hadda ku sugan xaalad khatar. Aad ayey muhiim u tahay, waana la soo dhoweynayaa. Balse waxaa habboon in culeys la saaro hawlaha ka hortagga. Si kolkaas loo gaaro in aanba loo baahnaan sharci oo ay dadka ku nool Iswiidhen u wada arkaan in ay qalad tahay in qof carruur ah loo guuriyo.